Thu, Apr 19, 2018 | 19:41:20 NST
सरकार परिवर्तन बारे कानुन व्यावसायीका फरक फरक कुरा आएका छन् । हैन यो नेपालमा जस्ले जे बोले पनि हुने ? कोही कानुनविद् सरकार बन्छ भन्छन् कोही बन्दैन । नेपालीलाई प्रष्ट पार्ने कोही छैनन कानुनविद् ।
​काँग्रेस र माओवादी निकट कानुन व्यावसायीले ओली ज्यूको राजीनामा बिना नै नयाँ सरकार बन्छ भनेको सुन्दा अचम्म लाग्यो । हैन सरकार बन्न त संविधान अनुसार जानुपर्ने हैन र एउटाले राजीनामा नदिइ कसरी बन्छ नयाँ सरकार ?
नेतृत्व पंक्तिमा रहेका नेताहरूको ध्यान नागरिकका लागि नभै आफू कुर्सीमा पुग्ने दाउमा मात्र छ, यीनिहरु देश बनाउन आएका हुँदै होइनन् ।
एमालेको सरकार हुँदा कांग्रेसले ढाल्ने योजना बनायो, भोली कांग्रेसको सरकारमा हुँदा एमालेले ढाल्ला । आखिर सबै मिलेर राज्यको ढुकुटी रित्याउने त हो ।
डाक्टर केसिलाई बधाई छ, यो आन्दोलन केसीको मात्र होइन, यो आन्दोलन त याबत बेथिति र बेसङगति विरुद्धको हो । अब यसका विरुद्ध सबै नेपाली उठ्नुपर्छ ।
अनुगमन गर्नेलाई वान्ता त भैहाल्छ नि ! आफुले खाने राम्रो भैहाल्छ, सोझा जनताले खाने नै यस्ता खानेकुरा त हो नी । अनुगमन गर्ने काम पनि त कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भने जस्तै हो ।
​एन पि धमला
पाइपलाइनबाट ग्यास चाहिदैन सरकार तर यो बर्खामा पनि सडक मर्मत होला जस्तो छैन । कार्यालय जाँदा कपडाभरी हिलो लागेपछि बिचबाटै घर फर्किन नपरोस् सरकार ।
कालिमाटीको तरकारी बजारको अनुगमनको समाचार पढ्दा लाग्यो हामी बाध्यताले बिषादी खाइरहेछौ । उपचार नक्कली डाक्टरले गर्छन् अनि केहि सीप नलागेर धामि कहाँ उपचारको लागि जान बाध्य हुन्छौ ।
गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो यो । सरकार यस्तालाई च्याप्प समाएर जेलमा राख ।
भूकम्पमा भत्किएका घर बनाउन २३ हजार पीडितको खातामा रकम जम्मा भएका खबर सुन्न त पाइयो । व्यक्तिका नाममा जम्मा भएको रकम सहि काममा गएकाे नगएकाे भनेर निगरानी राख्ने निकाय कुन हो?
​विमल के आर
साल फेरियो सरकार त्यो पाल फेरिएन, गरिब पीडितको त्यो हाल फेरिएन, भेलबाढी पहिरो आउन लाग्यो तर राहत दिने कछुवाको त्यो चाल फेरिएन ।
ट्वीट गर्नुभएको छ, मोर्चा र गठबन्धन जुहारी खेलेरै दिन बिताउँछन् । वार्ता गर्ने चाँहि कहिले हो ? कठै !
नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको खेतियोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ भैरहेको छ । यस्तै हो भने अबको ४/५ वर्षमा यो क्षेत्रमा खेतियोग्य जमिन नै देख्न नपाइने डर छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको लापरवाही, गुणस्तरहिन सेवा र कर्मचारीको कार्यशैलीबाट दिक्दार भएकै कारण नक्कली ड्राईभर बढेका छन् । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिने की ।